Blog Companylọ Ọrụ Gị Ọ Ga-abụ na Ndụ Gị dabere na Ya? | Martech Zone
Tọzdee, Machị 15, 2007 Friday, December 15, 2017 Douglas Karr
Enwere ụfọdụ ndị na-eche na ndị na-ede blọgụ na-agbada n'ime ime ụlọ anyị nwere igbe ndị nwere pizza na Mountain Dew n'ebe niile. Enwere echiche ọzọ nke ndị na-ede blọgụ na ị nwere ike ọ gaghị ama. Ndị na-ede blọgụ bụ ndị na-elekọta mmadụ na-achọ nkwurịta okwu (na mgbe ụfọdụ anya!).
Taa, enwere m nzukọ nzukọ ụtụtụ na ụfọdụ ndị si na Nkọ Mkpụrụ. Enwere m ohere iji kọwaa ahụmịhe m na ịde blọgụ na otu ma nye m nghọta banyere usoro ịde blọgụ nke ụlọ ọrụ. A nabatara nkuzi ahụ nke ọma ma enwere m obi ụtọ ọfụma.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere nkuzi a bụ na ihe niile mere site na ịde blọgụ. Ndị bịara ya sitere na onye isi ngalaba ngalaba na Mahadum Ball State na onye nnọchi anya IT na ụlọ ọrụ na-emepụta ihe. Atụrụ m ụjọ - ha nwere oke ọchichọ, mara ma na-etinye aka (n'ezie Sharp Minds!). Agaghị m ezute ndị folks a ma a sị na ọ bụghị maka ịde blọgụ.
Amalitere m ịde blọgụ. M nyeere Pat Coyle aka ịde blọgụ. Ọnụ anyị bido mepere emepe maka ndị otu Indianapolis ịkọ akụkọ ha maka ihe mere ha jiri hụ obodo ahụ n’anya. Pat zutere Ron Brumbarger, Onye isi na onye isi nke Bitwise Ngwọta na-atụle blọgụ m. Ron na-ebute Sharp Minds iji kpọkọta ndị nọ na mpaghara iji kwurịta nkà na ụzụ ma chee na ịde blọgụ ga-abụ isiokwu dị ukwuu maka ha iji kwurịta. Ya mere, Ron na Pat na-eso m rie nri ehihie ma anyị edozi ya.
Niile site na ịde blọgụ.
Ohere diri ndi nile biara ma otutu anya ha juputara. Fọdụ dere peeji nke ndetu. Ahụrụ m nodding isi (ikekwe otu site na enweghị mmasị 😉 - ọ bụghị mmadụ niile na-enwe obi ụtọ banyere ịde blọgụ dị ka m na-eme). Ọ bụ nnukwu ohere na otu ọmarịcha ndị mmadụ iji kọwaa teknụzụ a.
Ọtụtụ n'ime mkparịta ụka ahụ gbasara ụjọ nke ụlọ ọrụ ịme ihe ahụ - ọ bụ nnukwu. Dị ka atụmatụ ọ bụla, ịde blọgụ chọrọ atụmatụ na ụkpụrụ nduzi ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ. Emela nke ọma, ị ga - eme ka ụlọ ọrụ gị na onwe gị gaa n'ihu dị ka ndị isi chere na ụlọ ọrụ gị, bụrụ onye mbụ na igwe okwu na mkparịta ụka gbasara ngwaahịa gị, ma soro ndị ahịa gị na atụmanya gị nwee mmekọrịta.
Echere m na otu n'ime realizations anyị bịara bụ na ụlọ ọrụ kwesịrị ịmakụ na ịnakwere teknụzụ ọhụụ karịa ka egwu na-akpali ha. Otu ihe atụ bụ Iwu Kent Steeti machibidoro ndị egwuregwu ha itinye na Facebook. Cheedị ma ọ bụrụ na ndị nchịkwa nwere ohere gbaa ma nyochaa omume ndị na-eme egwuregwu na Facebook kama. Nke ahụ ọ ga-abụ ọmarịcha mbanye n'ọrụ? Eche m.
Ka m na-agwa prọfesọ si Ball Ball okwu, echere m na ọ ga-abụ ihe ịtụnanya ịhụ blọgụ Freshman na ịntanetị, ịkụziri ụmụ akwụkwọ kọleji na ndụ College, ịnọ n'ụlọ, na ahụmịhe nke nnwere onwe na kọleji. Nke ahụ bụ blọọgụ dị ike!
Dị ka nke ọma, m ịde blọgụ enweta m na Kọmitii Ndi mmadu Indiana n'abalị a ebe m zutere Roger Williams, Onye isi oche nke Gentlọ Ọrụ Ndị Isi Ọchịchị. Roger jiri netwọkụ mmekọrịta na-ahazi ma wuo obodo nke ndị isi na-eto eto na mpaghara ahụ. Chaị!
M zutere ndị nnọchianya si Inyere Ezigbo Ndị Ochie na Ezinụlọ Aka, nzukọ na-enweghị atụ nke na-enyere ndị na-enweghị ebe obibi na-enweghị ebe obibi aka ịlaghachi n'ụkwụ ha na mmemme nke ogologo oge nke ndụmọdụ na nlekọta. Ugbu a ha nwere ụmụ anụmanụ na-enweghị ebe obibi 140 na mmemme ha, na-enye ha nri, ebe obibi, itinye ọrụ, wdg.
Mmasị nke uru ndị a abụghị ihe ịtụnanya na a gbara m ume ka ha niile wee hụ ohere na teknụzụ. E nwere ụfọdụ esemokwu n'etiti ìgwè abụọ ahụ. Otu ụtụtụ ahụ nwere azụmaahịa na-aga nke ọma nke na-achọsi ike maka teknụzụ ọhụụ na, ma eleghị anya, obere nchegbu banyere ihe ịma aka ndị a ga-eweta. Otu mgbede nwere agụụ maka teknụzụ na-esote ga-ejikọ ha na ndị ọzọ ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma.
Echere m na mgbe azụmahịa gị bụ ịchekwa Vet ma ọ bụ ịchọta nri na-esote maka onye agụụ na-agụ, teknụzụ ọ bụla na-enyere aka dị mma.
Tags: obere ihe ngwọtaịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụpụta ìhèndị na-enweghị ebe obibi na-enweghị ebe obibiIndiakent steetipat coylenkọ uche